ပင်မစာမျက်နှာ ဘောလုံးမန်နေဂျာ Brendan Rodgers ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဒီဇင်ဘာလတွင် 1, 2019
LB သည်ဘောလုံးမန်နေဂျာတစ် ဦး ၏ပုံပြင်အပြည့်အစုံကို“ nickname” ဖြင့်သိသည်။ဘာ့ခ်ရော့ဂျာ“ ကျွန်ုပ်တို့၏ Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များပုံပြင် Plus ၏မရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများသည်သင့်ကလေးဘ ၀ မှယနေ့အထိထင်ရှားသောအဖြစ်အပျက်များကိုမှတ်တမ်းတင်စေသည်။
Brendan Rodgers ၏ဘဝနှင့်ထ။ ပုံခရက်ဒစ် - DailyRecord, တွစ်တာ, ကွေးနနျးစကျ နှင့် မှတ်မိ
ဟုတ်ပါတယ်၊ လူတိုင်းကသူ့ကစားသမားတွေဖန်တီးပုံဖော်တဲ့သူ့ရဲ့အေးမြတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကိုသိတယ် ဘောလုံးကိုအပိုင် ထား၍ ဘောလုံးကိုအမြဲရွေ့လျားနေသောစီးဆင်းနေသောကစားနည်းကိုကစားပါ။ သို့သော်ဘောလုံးပရိသတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့၏ Brendan Rodgers အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုအတော်လေးစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။ နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ရဲ့စတင်ကြကုန်အံ့။
Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မိသားစုနောက်ခံနဲ့အစောပိုင်းဘဝ
Brendan ရော့ဂျာကိုဇန်နဝါရီလ 26 ၏ 1973 နေ့တွင်သူ၏မိခင် Christina Rodgers နှင့်ဖခင်ဖြစ်သူ Carnlough မှ Malachy Rodgers မှမွေးဖွားခဲ့ပြီး Google Map မှအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
Brendan Rodgers သည် Carnlough ကျေးရွာတွင်ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ Image Credit - Google Map နှင့် DailyRecord
အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းမိသားစုမှဆင်းသက်လာသောအောင်မြင်သောအင်္ဂလိပ်မန်နေဂျာမှာမိဘများဖြစ်သောခရစ်စတီနာ (အမေ) နှင့်မာလခိ (ဖခင်) မှမွေးဖွားသောယောက်ျားလေးငါးယောက်၏အကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်။ Brendan Rodgers သည်ပန်းချီနှင့်ပန်းချီဆရာပန်းချီဆရာဖြစ်သည့်သူ့အဖေလည်ပတ်သောအလယ်တန်းမိသားစုမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ သူ့အဖေသည်ပန်းချီနှင့်အလှဆင်အလုပ်များလုပ်စဉ် Brendan ၏မိခင်ဖြစ်သူ Christiana သည် Brendan နှင့်သူ့အစ်ကိုများကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခဲ့သည်။ တစ်ခါတစ်ရံသူသည်အိုင်ယာလန်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ပါ ၀ င်သည်။
Brendan သည် Carnlough တွင်ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်:7အရွယ်ကလေးငယ်တစ် ဦး အနေနှင့် Brendan သည်ဆင်းရဲသောကျေးရွာတွင်ရာဇ ၀ တ်မှုနှုန်းမြင့်မားသောကြောင့်အများအားဖြင့်အိမ်တွင်း၌ထားရှိလေ့ရှိသည်။ ရာဇ ၀ တ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခြင်းဇွန်လ4တွင်အိုင်ယာလန်လွတ်လပ်ရေးပါတီဝင်နှင့် Larne Borough ကောင်စီကောင်စီဝင် John Turnley တို့သည်ကျေးရွာရှိလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုများဖြင့်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ရွာသူရွာသားနှစ် ဦး က ထပ်မံ၍ သေဒဏ်ပေးခံရသည့် Loyalist အဖွဲ့မှအင်ဒရူး Mason သေဆုံးခဲ့သည်။
Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင် Buildup
Carnlough မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာအိပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာဘောလုံးရှိတုန်းက Brendan အပါအ ၀ င်ယောက်ျားလေးများအတွက်ဗလာကျင်းမှုကအဆုံးသတ်သွားသည်။ ဘောလုံးကစားခြင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ Brendan Rodgers ၏မိသားစုကိုပရိသတ်ရှေ့မှောက်တွင်ကောင်းစွာကိုယ်စားပြုခဲ့သည် ရှက်ဖီးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နှင့်ဆဲလ်တစ်.
ရော့ဂျာသည်သူတက်ရောက်စဉ်အားကစားကာလအတွင်းဘောလုံးကစားခဲ့သည် သူတော်စင်အားလုံးကက်သလစ်မူလတန်းကျောင်း အိုင်ယာလန်မြောက်ပိုင်းရှိ Ballymena မြို့တွင်သူ၏မိသားစုအိမ်မှ 26 မိနစ်ခန့်မောင်းနှင်နိုင်သည်။ အားကစားတွင်မိသားစုပါဝင်ခြင်းသည်တစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက Brendan Rodgers ရဲ့မိဘတွေကသူတို့ရဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုပညာရေးရဖို့သာမကပဲအားလပ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ချင်နေစေချင်တယ်။
Brendan သည်ဘောလုံးကိုရွေးချယ်စဉ်တွင်သူ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများထဲမှတေးဂီတကိုယူခဲ့သည်၊ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည်သူ့မိသားစုတစ်စုလုံးအားအချိန်တိုင်းဂုဏ်ယူစေခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… Brendan Rodgers ၏မိသားစုသည်ကျော်ကြားသောတိုင်းပြည်နှင့်အနောက်တိုင်းအဆိုတော်ဖြစ်လာခဲ့သည့်သူ့ကလေးငယ်အစ်ကို Malachy Jnr ၏အစောပိုင်းအောင်မြင်မှုနှင့်အတူပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ငယ်ဘဝဘဝ
သူ၏အငယ်လေးသည်သူ၏ဂီတလုပ်ငန်းတွင်ထူးချွန်သော်လည်း Brendan Rodgers သည်ဘောလုံးသမားဘဝကိုစတင်ရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင် ဦး ဆောင်မှုကိုယူခဲ့သည်။ 1984 နှစ်တွင်အောင်မြင်သောစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်ရော့ဂျာနည်းနည်း (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) သည် Ballymena ယူနိုက်တက်နှင့်သူ၏ဒေသခံအသင်းနှင့်အတူနောက်ခံလူအဖြစ်ငယ်စဉ်ဘဝကိုစတင်ခဲ့သည်။
Ballydana နှင့်အတူငယ်ရွယ်စဉ်က Brendan Rodgers ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်။ DailyRecord
သူကစားနေစဉ်ကာလအတွင်း Brendan Rodgers သည်မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်လူမျိုးကိုသူကိုးကွယ်ခဲ့သည် Anton Rogan အဘယ်သူသည်7နှစ်ပေါင်းသည်သူ၏အကြီးတန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည်ငယ်ရွယ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၌ကြီးမားသောအထင်အမြင်ကိုရရှိခဲ့ပြီးသူသည်အကယ်ဒမီဘွဲ့မတိုင်မီကပင်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုမှုရရှိခဲ့သည်။
မင်းသိလား?… အကယ်ဒမီကျောင်းတက်နေတုန်း Brendan Rodgers သည်မြောက်အိုင်ယာလန်ကိုကျောင်းနေအရွယ်တွင်ကိုယ်စားပြုရန်ခေါ်ယူခြင်းခံရသည်။ ထိုသို့သောရင့်ကျက်မှုသည်ငယ်စဉ်ကတည်းက 1987 ရှိသူ၏ကလပ်သည်သူ့ကိုအကြီးတန်းဘောလုံးကစားသမားအဖြစ်မြင်တွေ့ခဲ့သည်။
Brendan Rodgers သည်သူ၏ Schoolboy အဖွဲ့နှင့်အစောပိုင်းနှစ်များ။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်။ DailyRecord
ရော့ဂျာသည်အကယ်ဒမီဘွဲ့ရပြီးနောက်သူ၏ကျေးလက်နှင့်ဆက်လက်တိုးတက်ခဲ့သည်။ 1988 တွင်သူသည်စိန့်ပက်ထရစ်ကောလိပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးအသင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကစားသည့်မြောက်အိုင်ယာလန်ကိုဆက်လက်ကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ ဘရာဇီး.
Brendan Rodgers သည်သူ၏အသင်းများကိုမြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံလုံးဝနားမကြားသည့်အချိန်တွင်သူလိုချင်သည့်ပုံစံဖြင့်ဘောလုံးကစားခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကသူ၏နည်းပြဟောင်းသည်သူသည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝမှုနှင့်တိုင်းပြည်၏အကြီးတန်းအသင်း၏အနာဂတ်အဖြစ်မှတ်ယူခံခဲ့ရပုံကိုပြန်ပြောပြနိုင်ခဲ့သည်။ ဤချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုများအားလုံးကြားမှ Brendan Rodgers သည်အနည်းငယ်သာသိရှိခဲ့ရသည် မှောင်မိုက်ကို TIMES ကြွတော်မူရာလမ်းကိုပြင်ကြလော့။
Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame Story သို့ခက်ခဲသောလမ်း
Ballymena ယူနိုက်တက်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်လာပြီးနောက် 18 ၏အသက်အရွယ်၌ Brendan Rodgers စာဖတ်ခြင်းအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ မင်းသိလား?… သူ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုသည်ဒူးထောက်အခွအေနေကြောင့်ပင်မစတင်မှီရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားခဲ့သည် မိသားစု osteochondritis dissecans.
Brendan Rodgers သည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာဒူးအခြေအနေကြောင့်ခံစားခဲ့ရပြီးသူ၏ဘောလုံးသမားဘဝကိုပျက်ပြားစေခဲ့သည်။ Image Credits- clickittefaq, stack နှင့် MemeCenter ။
ထိုကဲ့သို့သောဒဏ်ရာများကိုခံစားခဲ့ရသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအဆုံးသတ်ခြင်းသို့ ဦး တည်သွားသောမည်သည့်ဘောလုံးသမားကိုမဆိုအလွန်စိတ်ထိခိုက်နာကျင်မှုကိုကောင်းကောင်းသိလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ အဖြစ်အပျက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာနှစ်ရပ်လုံးကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ Brendan Rodgers နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည်။
အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်အငြိမ်းစားယူပြီးနောက်ရော့ဂျာသည်သူ့ကိုအလုပ်ခန့်ထားသူကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်လျော်ကြေးငွေပေးခဲ့သည် လူငယ်နည်းပြ။ နည်းပြအတွေ့အကြုံပိုမိုရရှိစေရန်ရော့ဂျာသည် Newport (IOW), Witney Town နှင့် Newbury တို့နှင့်အတူပရီးမီးယားလိဂ်မဟုတ်သောဘောလုံးနည်းပြလူငယ်များကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လူငယ်နည်းပြတစ် ဦး အနေဖြင့်သူ၏လစာအနည်းငယ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် Brendan Rodgers နှင့်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ယောဟနျသ Lewis က သူ၏ငယ်ရွယ်သောမိသားစုကိုထောက်ပံ့ရန်စတိုးဆိုင်များ။
Brendan Rodgers သည်တစ်ချိန်ကသူ၏မိသားစုကိုကျွေးမွေးရန် John Lewis စတိုးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ Image Credit - MemeCenter နှင့် qualtrics
Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - Fame ပုံပြင်မှထလော့
သူဘယ်လိုအကူအညီရခဲ့သလဲ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို: များစွာသောအလုပ်များကိုလူငယ်နည်းပြနှင့်စတိုးဆိုင်မန်နေဂျာအဖြစ်စုဆောင်းပြီးနောက် 1990s နှောင်းပိုင်းမှ Brendan Rodgers သည်အဆင့်မြင့်နည်းပြပညာရေးရရှိရန်အတွက်စပိန်သို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူသည်ပညာရေးနှင့်စာဖတ်ခြင်းတွင်အလုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ထိပ်တန်းကလပ်များစွာနှင့်အလုပ်စတင်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို.
Brendan ရော့ဂျာသည်ချယ်လ်ဆီးလူငယ်နည်းပြအဖြစ်ရက်ပေါင်းများစွာ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်။ Sportskeeda
မင်းသိလား? ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို သူသည် Brendan Rodger ၏ CV ကိုသဘောကျကာချယ်လ်ဆီးလူငယ်အလုပ်အတွက်သူတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ရော့ဂျာသည်စာဖတ်ခြင်းတွင်အကယ်ဒမီဒါရိုက်တာအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဘောလုံးလောကကြီးသို့ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ 2004 တွင်ချယ်လ်ဆီးအကယ်ဒမီ၏လူငယ်နည်းပြဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို နှစ်နှစ်တာကာလချယ်လ်ဆီးတွင်ရော်ဂျာကိုအရံအသင်းမန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ Brendan သည်သူကြီးပြင်းရန်အခွင့်အလမ်းပေးသောသူ၏သူဌေးအား (အောက်ပုံတွင်) အလွန်သစ္စာရှိခဲ့သောကြောင့်ဤရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုသည်ချယ်လ်ဆီးအသင်းနှင့်အတူသူ့ဘ ၀ အတွင်းသစ္စာရှိမှုကြောင့်ဘရန်ဒန်ရော့ဂျာကိုရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ အကြွေး - အိပ်မက်
အောက်ပါ အထူးတ ဦး တည်းရဲ့ ထွက်ခွာသွားသည့် Brendan ရော့ဂျာသည်ချယ်လ်ဆီးမန်နေဂျာ Avram Grant နှင့် Luiz Felipe Scolari တို့၏အနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ ကြီးထွားရန်အချိန်အလုံအလောက်ရရှိပြီးနောက် Brendan Rodgers သည် Watford, Reading နှင့်အနန္တတန်ခိုးရှင် Swansea မြို့ကိုအဓိကနည်းပြအဖြစ်ထွက်ခွာခဲ့သည်။
ဆွမ်ဆီးမြို့တွင်ဝလေကလပ်ကိုထိပ်တန်းလေယာဉ်ဖြင့်လမ်းပြစဉ်လူကြိုက်များမှုနည်းပါးသောနည်းပြသည်လူအများအသိအမှတ်ပြုမှုကိုစတင်ရရှိခဲ့သည်။ လီဗာပူးလ်တွင် Brendan Rodgers သည် 2012 ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားရရှိရန်နီးစပ်သည်။ သူကအနိုင်ရခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်းချန်ပီယံလိဂ်ဘောလုံးအသင်းကို (၅ နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်) လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လီဗာပူးလ်မှထွက်ခွာပြီးနောက်ရော့ဂျာသည်စကော့တလန်ချန်ပီယံချန်ပီယံ၏မန်နေဂျာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ မည့်အစား လီဗာပူးလ်နည်းပြဟောင်းသည်အင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာခဲ့သည်။ သူ Celtic ကိုသူ့ရဲ့ပထမဆုံးနှစ်မှာမစွမ်းနိုင်တဲ့အိမ်တွင်းရာသီကို ဦး ဆောင်ခဲ့ရပြီး၊ ကျောက်တုံးကြီး သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးနှစ်ရာသီနှစ်ခုလုံး၌တည်၏။
Brendan Rodgers သည် Celtic အတွက်နှစ်ကြိမ်တိုင်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်။ LcFc
Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - relationship ဘဝ
ဒဏ်ရာရပြီးဘောလုံးကစားခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်နောက် Brendan Rodgers သည်သူမကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်သည့်အချိန်တွင်သူ၏ရည်းစား Sussan နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးနီးပါးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအဘို့အရက်စွဲပါ။ Brendan သည် 28 နှစ်တွင် Sussan ကိုလက်ထပ်သည့်အချိန်တွင် 2001 နှစ်ဖြစ်သည် စဉ်တွင် သူနေဆဲစီမံခန့်ခွဲမှုကမ်ဘာပျေါတှငျအဘယ်သူမျှမခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Brendan Rodgers ၏ဇနီး Sussan သည်သူတို့မကွာရှင်းမှီအတူတကွပျော်ရွှင်စွာအတူနေထိုင်ကြသည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်။ ကြည့်မှန်
Susan Rodgers သည် John Lewis ရှိစတိုးဆိုင်မန်နေဂျာဖြစ်ချိန် မှစ၍ ချယ်လ်ဆီးလူငယ်နည်းပြဖြစ်လာသည့်အချိန်နှင့်အရေးကြီးဆုံးအချက်အနေဖြင့်လီဗာပူးလ်တွင်နည်းပြအလုပ်အကိုင်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိချိန်အထိသူ၏ခင်ပွန်းနှင့်ထူထပ်သောပါးစပ်ဖြင့်နေခဲ့သည်။ ချစ်သူနှစ် ဦး စလုံးအမည်ရှိကလေးနှစ်ယောက်နှင့်အတူကောင်းကြီးပေးတော်မူပြီ Anton Rodgers (မွေးဖွား; 26 ဇန်နဝါရီလ 1993) နှင့် Mischa ရော့ဂျာ။ အောက်တွင် Susan မှ Brendan Rodgers ၏ကလေးငယ်များ၏ပုံကိုတွေ့ရသည်။
Brendan Rodgers ၏ကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံပါ - Anton နှင့် Mischa Rodgers အကြွေး -TheTimes & ကြည့်မှန်
မင်းသိလား?… Brendan Rodgers ၏သား Anton Michael Rodgers သည်သူ့အဖေ၏ခြေရာကိုလိုက်ခဲ့သည်။ ကွင်းလယ်ကစားသမားအဖြစ်ကစားသောအိုင်ယာလန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားသည်သူ၏ငယ်စဉ်ဘဝကို 2006 မှ 2011 မှချယ်လ်ဆီးအသင်းအကယ်ဒမီတွင်စတင်ခဲ့ပြီးသူ၏ဖခင်ကသူ့ကိုနည်းပြအဖြစ်ခန့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါကွာရှင်းပုံပြင်လီဗာပူးလ်တွင်ရော့ဂျာ၏သက်တမ်းအတွင်းသူနှင့်စူဇန်တို့အကြားဆက်ဆံရေးသည်အစမှေးမှိန်လာသည်။ ဘဏ္settlementာရေးအရဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်မှာ Brendan Rodgers သည်ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိသည့် 102 အိမ်များပါဝင်သောသူ၏မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုအင်ပါယာအပေါ်ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာကွာရှင်းပြတ်စဲမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။Dailymail အစီရင်ခံစာ).
14 နှစ် 2015 လက်ထပ်ပြီးနောက် Rodgers သည်သူ၏ဇနီးဆူနှင့်ကွာရှင်းခဲ့သည်။ သူသည်ဇနီးဖြစ်သူ Charlotte Searle နှင့်လက်ထပ်ရန်အဆိုပြုခြင်းနှင့်လက်ထပ်ခြင်းမပြုမီနှစ်နှစ်ကြာသည်အထိခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ 2017 တွင်စကော့တလန်ရှိ Loch Lomond တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောနတ်သမီးပုံပြင်သည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
Scottland ရှိ Loch Lomond ဂေါက်ကလပ်တွင် Brendan Rodgers သည် Charlotte ကိုလက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်။ ကြည့်မှန်
သူသည်နယူးယောက်၌ ၄ လအကြာတွင် 2017 ၌မစ္စ Charlotte Searle နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူမလက်မထပ်မီတွင် Charlotte Searle သည်သူမအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်စဉ်ရော့ဂျာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည့်ကွာရှင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည် လီဗာပူးလ် FC ခရီးသွားညှိနှိုင်းရေးမှူး သူသည်လီဗာပူးလ်အသင်း၏မန်နေဂျာဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့အစောပိုင်းကတွေ့ဆုံမှုဟာဇနီးဟောင်းဆူဆန်နဲ့ကွာရှင်းမှုကြောင့်ဘရန်ဒန်ရော့ဂျာရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြissuesနာရဲ့အကြောင်းရင်းလားဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။
Charlotte Searle သူမ၏လျှပ်တစ်ပြက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအတွက်ယုံကြည်မှု oozes ။ သူမကိုယ်ကျိုးမငဲ့သောသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူမကိုယ်တိုင်သူမဘ ၀ နှင့်ဝေးကွာသောအလုပ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။.
Charlotte Searle သည် Celtic ၌သူမ၏ခင်ပွန်း၏အောင်မြင်မှုတိုင်းကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ်။ Dailymail
Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
Brendan Rodgers ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဘောလုံးရေးရာကိစ္စများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခြင်းသည်သူ၏ပင်ကိုစရိုက်ကိုအပြည့်အဝနားလည်အောင်ကူညီလိမ့်မည်။ ကွင်းပြင်မှဝေးကွာသောရော့ဂျာအားလူတိုင်းနီးပါးနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သောချစ်ခင်ကြင်နာတတ်သော၊ ယဉ်ကျေးပြီးရက်ရောသူတစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည် - သူ၏သစ္စာရှိပရိသတ်မှသည်စားသောက်ဆိုင်စားပွဲထိုးအထိ။
ဘောလုံးနှင့်ဝေးနေခြင်း Brendan Rodgers ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝကိုလေ့လာခြင်း။ Image ကို Credit: Belfastlive
ရော့ဂျာကသင်လိုအပ်သည်ဟုထင်သည့်ငွေကိုပင်ရှာဖွေခြင်းထက်ပျော်ရွှင်မှုကိုယုံကြည်သည်။ အစီရင်ခံစာများအရသူသည်တစ်ကြိမ်မှချဉ်းကပ်မှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည် တရုတ်ကလပ် 2018 ပြောပြ၏နွေရာသီကာလအတွင်း ဘီဘီစီစကော့တလန် အဲဒါ "တရုတ်နဲ့ဆိုရင်အဲဒါကပိုက်ဆံကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဒီမှာပျော်ရွှင်မှုရခဲ့တယ်။ "
Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မိသားစုဘဝ
ကျွန်ုပ်တို့၏ရေးမှတ်မှု၏ဤအပိုင်းတွင် Brendan Rodgers ၏မိသားစု ၀ င်များအကြောင်းသူ့အမေမှစတင်သည်။
Brendan Rodgers ၏မိခင်အကြောင်း: Christiana သည်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာကွဲပြားခြားနားသောအမြင်ရှိသည်။ သူသည် Brendan နှင့်သူ၏အစ်ကိုများအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ရန်ခွင့်မပြုပါ။ ခရစ္စတီးနားရော့ဂျာသည်သူမနှလုံးကြေကွဲဖွယ်ခံစားခဲ့ရသည့်နှစ်ဖြစ်သော 2010 တွင်သူမသေဆုံးခင်အထိဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောဆန္ဒပြသူဖြစ်သည်။
Brendan ရော့ဂျာ၏အဖေအကြောင်း: Malachy Rodgers, Brendan Rodgers ၏ဖခင်သည်ပန်းချီဆရာ၊ အလှဆင်သူဖြစ်ပြီးအရေးအကြီးဆုံးမှာဘုရားကိုကိုးကွယ်သောကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သည်။ သူသည်သူ့ဘဝနှောင်းပိုင်းတွင်ကင်ဆာရောဂါခံစားခဲ့ရပြီးခံစားခဲ့ရသည်။ 2010 နှစ်တွင်သူ၏ဇနီး Christiana လက်ဆင့်ကမ်းပြီးသည့်နောက် Malachy သည်၎င်းကိုမခံနိုင်ပါ။ သူ၏ဇနီးကမ္ဘာပေါ်မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်သူသည်ကင်ဆာရောဂါ၏အကျိုးဆက်မှသေဆုံးခဲ့သည်။
Brendan Rodgers Brothers: Brendan Rodgers ၏မိသားစုတွင်မောင်နှမများပါ ၀ င်ပြီးအစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသူသည်သူ့မိသားစု၏အောင်မြင်မှုကိုမြည်းစမ်းခဲ့သူမဟုတ်ပါ။ Brendan နှင့်သူ၏အစ်ကို Malachy Rodgers Jnr တို့ကိုရော့ဂျာအားအောင်မြင်စွာလူသိများသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Malachy Rodgers Jnr သည်ဂီတလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်သူ့ကိုယ်သူနာမည်ကောင်းတစ်ခုပေးခဲ့သည် Nashville, Tennesseeအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု။
Brendan ရော့ဂျာ၏ညီ - Declan Rodgers နှင့်တွေ့ဆုံပါ။ Image Credit- TheSun
မင်းသိလား?… Nashville အခြေစိုက် Malachy Rodgers Jnr ကို 'nicknamed'malဘီဘီစီအခရာနိုင်ငံအေးမြ'' သူသည်အစွန်းရောက်သူရဲကောင်းဖြစ်လာသည့်အမေရိကန် (Tennessee) သို့မသွားမီသူ၏ဇာတိမြောက်အိုင်ယာလန်တွင်ရှိသည်။ ဘဝ၏အခြားတစ်ဖက်တွင်, Declan Rodgers အမည်ရှိသောဘရန်ဒန်ရော့ဂျာ၏ညီများထဲမှတစ် ဦး သည်၎င်းသည်ချမ်းသာပြီးအောင်မြင်မှုမဖြစ်စေခဲ့ပါ။ ညံ့ဖျင်းသောကြွေးမြီများကြောင့်လိုက်လံဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်တစ်ချိန်ကဒေဝါလီခံခြင်းနှင့်ပါးရိုက်ခြင်းခံရသည့်အောက်ပါပုံညံ့ဖျင်းသော Declan Rodgers
Brendan ရော့ဂျာကညီကို Declan ကိုဖဲ့ခဲ့သည်။ အကြွေး TheScottishSun
Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - လူနေမှုပုံစံစတဲ့
Brendan Rodgers သည်တစ်ချိန်ကပေါင်စတာလင် (8million) ဝန်းကျင်ခန့်တွင်လှပသောလျော်ကြေးပေးခြင်းအစီအစဉ်ကိုရရှိခဲ့သည့်သန်းပေါင်းများစွာသောသူဌေးကြီးဖြစ်သည်။ သူသည်အောက်တိုဘာလ 2015 တွင်လီဗာပူးလ်မန်နေဂျာအဖြစ်မှထုတ်ပယ်ခံရချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ သူသည် Celtic သို့ပြောင်းရွေ့ကစားသမားတစ် ဦး လျှင်ပေါင်စတာလင် (45,000) တစ်ပတ် ၀ င်ငွေပေါင်စတာလင်သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောသူဌေးဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဤငွေကြေးအမြောက်အများရှိသော်လည်းဘရန်ဒန်သည်ပြင်ပတွင်ပျမ်းမျှလူနေမှုပုံစံဖြင့်နေထိုင်သည်။ ဤသည်ရော့ဂျာတစ်ရှိကြောင်းဆိုလို သူ၏ဘဏ္ancesာရေးကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်၊ သူသည်လူမှုရေးမီဒီယာတစ်ခုမဟုတ်၊ သူရေးသားသည့်အချိန်တွင်အကောင့်မရှိသော၊ သူ၏အလုပ်ကိုသာအာရုံစူးစိုက်သည်။
Brendan Rodgers ကိုလေ့လာခြင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်အလက်တွေ။ Image Credit- TheHeraldScotland နှင့် CelticNewsNow
Brendan Rodgers ကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်နိုင်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိများ - မရေမတွက်အချက်အလက်
သူ၏ခက်ခဲသော4၏နှစ်များ - 2010 - 2014 မှစတင်ခဲ့သောနှစ်များ ၎င်းသည်စိတ်အထိခိုက်ဆုံးနှစ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သည် Brendan ရော့ဂျာ၏ဘဝတစ်ခုလုံး။ ထိုနှစ်များသည်မိသားစုပြtroublနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်မှု (လီဗာပူးလ်နှင့်အတူသူ့လက်ထက်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသော) ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်မှုနှင့်ဖိအားပေးမှုကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အစမှ စတင်၍ မိသားစုဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုသည်မိခင်ဖြစ်သူဆုံးသွားသောအခါစတင်ခဲ့သည်။ ရော့ဂျာသည်သူ၏ဇနီးဆုံးရှုံးသွားသောအခါကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် (ကွာရှင်းခြင်းမှတဆင့်), သူ့ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် (ကွာရှင်းဖို့) နောက်ဆုံးတော့သူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိလီဗာပူးလ်အသင်းမှထွက်ခွာခဲ့ရသည်။
သူ၏နောက်ဆုံးဇနီး၏ခင်ပွန်းဟောင်းကသူ့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့သည်။ Brendan Rodgers ၏ဇနီးအသစ်ဖြစ်သော Charlotte Searle သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာမန်နေဂျာ Steven Hind နှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနှစ် ဦး စလုံးသည် 17 လနှင့်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်၊ နောက်ဆုံးတွင် 2013 တွင်ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းမပြုမီသမီးနှင့်အတူလက်ထပ်ခဲ့သည်။
ဘရန်ဒန်ရော့ဂျာ၏ဇနီးသည်ခင်ပွန်းဟောင်းကဇနီးဖြစ်သူကထွက်ခွာသွားပြီးနောက်သူမဘဝအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Image Credit- Dailymail
မင်းသိလား?… Steven Hind ကို London ရှိနာမည်ကျော် Bosco ဟိုတယ်၌သူ၏အခန်း၌သေပြီဖြစ်သည်။ သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသူသည်အောက်တိုဘာလ 2017 ပတ်ပတ်လည်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ပျက်ကွက်ပြီးနောက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ Brendan Rodgers ၏ခင်ပွန်းဟောင်းက '' စာတစ်စောင်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ဇနီးကသူ့အသက်ကိုသတ်ပစ်ခဲ့တယ် ''သူဆက်မသွားနိုင်တော့ပါ'' ။
သူ၏သားဖြစ်သူသည်စော်ကားမှုဖြင့်စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်ဖြေ - ဘရန်ဒန်ရော့ဂျာကသူ့ဇနီးနှင့်ခွဲခွာပြီးတာနဲ့သူ့မိသားစုဒုက္ခများဆက်ဖြစ်နေသည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ရော့ဂျာ၏သား (အန်တိုနီ) နှင့်အခြားလူသုံး ဦး ပြtroubleနာတက်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်အမျိုးသမီးအားတရားရုံးတွင်ဖမ်းဆီးပြီးတရားစွဲဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အမျိုးသမီးအားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်စဉ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သည်။
Brendan Rodgers Son သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားကိုယ်ထိလက်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ Image Credit- Dailymail
ဇူလိုင်လ 2011 ရှိ Brighton ရှိ Jury's Inn Hotel တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ Brendan Rodgers သည်သား၏တရားရုံးကိုအများပြည်သူပိုင်ပြခန်းမှကြည့်ခဲ့သည်။ သူ့အဖေတံဆိပ်တပ်ထားသော se * ual ချေမှုန်းမှုဖြင့်စွပ်စွဲခံရပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အန်တိုသည်အပြစ်လွတ်ခဲ့သည်။ 'အရှက်ကွဲခြင်း''
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျွန်ုပ်တို့၏ Brendan Rodgers Childhood Story Plus Untold Biography အချက်အလက်များဖတ်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ At LifeBogger, ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုအတွက်ကြိုးစားသည်။ မမှန်ကန်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တွေ့ရှိပါကအောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားလေးစားမည်။
Unai Emery ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဟိုဆေးမော်ရင်ဟိုကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်